1I-xBet yindawo yokubheja yezemidlalo yaseRussia okuhlose ukukunikeza amadili amahle kakhulu nezindlela ezingcono kakhulu ezenziwa online. Yize i-1xBet yadalwa ngonyaka ka-2012, isivele ingenye yababhuki abahle kakhulu.
Ukubhaliswa kwe-1xBet Cameroon kuzoba yisinyathelo sakho sokuqala kulo mdlalo nochwepheshe. Le nqubo itholakala kuphela kubasebenzisi abadala. Ungadlulisa ukubhaliswa kwe-1xBet Cameroon nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Ngemuva kokuthola ukufinyelela, okuzokwanela ukuxhasa ngezimali imali ye-akhawunti yakho yomdlalo nayo kuzoba ngokoqobo kwakho.
1xBet imishini yokuqopha
Ukwakha i-akhawunti eyi-1xBet, isinyathelo sokuqala ukufinyelela kuwebhusayithi esemthethweni yeHhovisi Lobhuki. Itholakala nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Vele uvule isayithi, lapho ekhoneni eliphezulu kwesokudla kunenkinobho ethi "Gcina".
Manje, kufanele uchofoze le nkinobho, emva kwalokho kuzoboniswa uhlelo 4 izinketho ukweqa inqubo. Siphawula ukuthi ukuqonda indlela yokubhalisa i-1xBet kulula kakhulu. Lokhu kwanele ukukhombisa ukuthi inani lemininingwane elincane elizoba ukhiye wakho ukuhambisa kule nkundla. Nazi izinketho ezitholakalayo:
Bhalisa ngokuchofoza okukodwa.
Ngenombolo yakho yocingo.
Ekuxhumaniseni kwe-akhawunti yakho kokunye ukuxhumana nomphakathi okunikelwe.
Khetha inketho yokubhalisa ye-1xBet. Ngamunye wabo uzokuvumela ukuthi uthole izinzuzo zangempela zokuqala ngabaholi bemakethe yaseParis.
1XBeka ukulingisa ngokuchofoza
Ngakho-ke, inketho elula kunazo zonke yokubhaliswa kwe-1xBet eCameroon irekhodi lokuchofoza okukodwa. Kufanele futhi ufake imininingwane edingekayo, njengezwe lakho ohlala kulo kanye nemali okwenziwa ngayo ukubheja.
Ngemuva kokucacisa la maphuzu amabili, inqubo yokubhalisa isiqediwe. Uzodinga ukuthi uqinisekise imininingwane yokufinyelela okugcwele ehhovisi lokubheja lezemidlalo eliku-inthanethi.
Ukubhaliswa kwenombolo yefoni engu-1xBet
Inketho elandelayo ethandwayo engazukuthatha ukubhaliswa isikhathi eside kwinombolo yabo yocingo. Ukwakha i-akhawunti eyi-1xBet kufanele uye kuwebhusayithi esemthethweni bese ucindezela inkinobho eluhlaza. Ngemva kwalokho, ewindini elivelayo, faka inombolo yakho yeselula nemali ofuna ukubheja kuyo.
Okusele nje wukuqinisekisa ukwenziwa kwemisebenzi yokufinyelela emicimbini yezemidlalo nokunye ukuzijabulisa kwe-inthanethi kuwebhusayithi yehhovisi likabhuki..
umbhalo we-imeyili 1xBet
Inketho yokubhalisa ye-1xBet yaseCameroon iveza inkomba ephelele ye-imeyili. Le ndlela izothatha isikhashana, kepha ukuhlonza umsebenzisi kuzoba lula kakhulu. Ngakho, ubhalisa kanjani i-1xBet? Inqubo icacile, kufanele ufake imininingwane elandelayo:
Qamba iphasiwedi yakho bese uyiphinda.
Khombisa inombolo yocingo lwakho oluphathwayo.
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili.
Ungacacisa futhi ikhodi yephromoshini ezokuvumela ukuthi uthole izici ezingeziwe. Leli rekhodi lokufinyelela kwe-1xBet ku-akhawunti yakho.
Umdlalo wakho uzoba lula kakhulu, ngoba ukuchofoza okumbalwa kuphela kusebenza nabachwepheshe.
Ukuxhumana kwi-akhawunti yokuxhumana nabantu
Uhlobo lwamuva nje lokubhaliswa kwe-1xBet Cameroon "luxhumekile" kunethiwekhi yokuxhumana nomphakathi. Nazi izinketho eziningana ngasikhathi sinye, ongakhetha kuzo:
Ukudala i-akhawunti kubandakanya ukufaka i-1xBet i-akhawunti yakho nokukhetha imali oyifunayo.
ngaphezulu, lapho ubhalisa, ungacacisa ikhodi yephromo ekhethekile kwi-Intanethi. Capture, uzothola imali eyengeziwe ku-akhawunti yakho, okuzovumela abasebenzisi abajwayelekile ukubheja inzuzo enkulu kakhulu. Imidlalo nabachwepheshe manje isizoba ngokoqobo, ngoba inqubo yokubhalisa ithatha isikhathi esincane kakhulu.
Ukuqoshwa kweselula kwe-1xBet
Ngenxa interface ephezulu, ungafinyelela ihhovisi lobhuki ngokusebenzisa uhlelo lwayo leselula. 4 Izinketho zokubhalisa ze-1xBet eCameroon ziyatholakala lapha. Lokhu konga isikhathi njengoba kuxhunyaniswe kakhulu kwikhompyutha futhi kungacacisa imininingwane, noma ngabe bayindawo yabo yamanje.
Ungabhalisa kanjani i-1xBet? Konke kulula. Kufanele uvule iwebhusayithi esemthethweni noma isicelo bese unikeza imininingwane edingekayo. Uhlelo luzirekhoda ngokuzenzakalelayo, futhi ungaxhuma epulatifomu ngokuchofoza okukodwa.
Inzuzo eyengeziwe evela ku-1xBet Cameroon izoqopha ibhonasi ekhethekile. Wabasaqalayo okhokhelwayo bayakhokha 100% kusuka kwidiphozi yokuqala. Ngalesi sipho, kulula ukuthola i-akhawunti yakho 130 ama-euro. Izimali zifakwa ngokuzenzakalelayo ngemuva kwediphozi yokuqala.
Yonke imisebenzi yasebhange ngaphakathi kwepulatifomu iphephile ngokuphelele. Ungaya eCameroon 1xBet ukubhaliswa nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Lapha, ochwepheshe bahlala benza izimo zomdlalo onengqondo ngempela. Maduze, imiphumela yokuqala yesibikezeli iqala ukuvela kwinombolo ye-akhawunti yakho.
Uma unemibuzo ngqo, ungaxhumana nabamele ideski losizo. Basebenza usuku lonke futhi bahlala bekulungele ukusiza abadlali ababhalisile.
Khetha indlela esebenzayo yokuthi ungonga kanjani i-1xBet ukonga isikhathi futhi uqale ukubheja ngokushesha okukhulu. Kuleli khaseji elihlonishwayo uthola ngokwesiko imicimbi ehlukahlukene, inani eliphakeme kakhulu kule ngxenye yemakethe kanye nezindlela ezahlukahlukene zokukhokha ezisetshenzisiwe.
Lokhu yikho okwenza umphakathi waseFrance ukhange kakhulu kubadlali emhlabeni jikelele. Ungesabi ukudala i-akhawunti eyi-1xBet namuhla, ngoba yithuba elikhulukazi lokuqala ukulandela imicimbi yezemidlalo emhlabeni wonke, kodwa futhi nokwenza umthombo othembekile weholo. Namuhla, kwaba ngokoqobo.
Inzuzo eyengeziwe izokusiza uzizwe ukhululekile kusukela emzuzwini wokuqala wokuhlala kule pulatifomu futhi uthole izinketho eziningi zeParis. Le ndlela izobaluleka ekukhuleni okuzinzile kwezimali zabo.
Lokhu kunikeza izinhlobonhlobo ezimangalisa zezinketho zokubheja kwamakhasimende. Kungakho i-1xbet idonsele izigidi zabadlali emhlabeni jikelele. 1xbet iyatholakala ku 42 izilimi futhi zamukela izinhlobo eziningi zezimali nezindlela ezahlukahlukene zokukhokha, kufaka neBitcoin!
Uma ufuna ukonga ku-1xbet, ungabheja okungaphezu koku 1000 imicimbi ngosuku. Kepha akupheleli lapho! 1I-xBet futhi inikezela ngesilinganiso esisodwa esiphezulu. Ukunikeza amakhulu emicimbi yezemidlalo, imidlalo yasekhasino, lottery, njll ..! Uzibuza ukuthi ungayakha kanjani i-akhawunti yakho eyi-1xbet? Ngizochaza konke ngale ndatshana!
1I-xBet igcwele izinketho ezahlukene kanye nedumela labo elikhulayo lifanelwe kahle. Ukubhalisela le Sportsbook kulula.
Ukubeka ukubheja, izibopho nokukhipha ukushintshaniswa kwemali, kufanele udale i-akhawunti yakho. 1xbet ukubhalisa bese uqala ukubheja, iya kubheja futhi uqedele imininingwane yakho:
Igama lomsebenzisi nephasiwedi ikhethiwe.
Uma usuqedile, kufanele uchofoze ku- "Gcina". 1I-XBET ivele ivume isicelo sakho futhi ungaqala ukudlala.
Ukubhaliswa kwe-1XBET kunezinzuzo eziningana. Ubhuki unikeza ibhonasi ye 200% ngekhodi yephromo 1x_825. Ukuze usebenzise le bhonasi, Kulula impela! Ngemuva kokubhalisa, uzofakwa kwi-akhawunti yakho ngaphandle kwengqikithi ye 1 i-euro noma okulingana ngohlobo lwakho lwemali, 1I-xbet izokunikeza ibhonasi ye 200% inani lediphozi yakho.
Phakathi kokunikezwayo okutholakalayo kwabadlali ababhalise i-1XBet, nakhu 2 ibhonasi nomshuwalense wediphozithi.
Ngo- "Lucky Friday" ukuphinda kabili idiphozi lakho olwenziwe ngoLwesihlanu ngaphakathi komkhawulo we 100 €. Ukuze ufanelekele lokhu kunikezwa, kufanele ubolekise i-akhawunti yakho 1 € noma ngaphezulu.
Izimo zokusakaza ziyefana nebhonasi eyamukelekile: kufanele udlale 3 Izikhathi iParis zihlangene 3 noma ukukhetha okuningi, cha 3 kumele kube ngesilinganiso se 1,40 noma ngaphezulu.
NgoLwesithathu – 2 zande
Ukunikezwa ngoLwesithathu – iphindaphindwe ngu 2 Ugcinelwe abadlali abahlomule ku- "Lucky Friday" futhi wakhipha yonke ibhonasi. Lokhu kunyuswa kuqinisekisa ukuphindwe kabili kwenani lesikweletu ngoLwesithathu (100 € Ibhonasi enkulu.).
Ukwethulwa kwephrimiyamu kubhekene nezimo ezibucayi kakhulu kunalezi Zimo “ZikaLwesihlanu”: 5 izeluleko ngosuku 2 izinsuku ngesilinganiso se 1,40 noma ngaphezulu. ngaphezu kwalokho, inani elihlanganisiwe lokubheja ngosuku olulodwa kufanele lilingane nomholo womqashi olutholwe ngoLwesihlanu olwedlule.
Njengoba kuboniswe ngegama lakhe, ungaqasha ephephile kubheja wakho uma nje eseqinisekisiwe. Uma ukubiza kwakho kulahlekile, inani lomshuwalense lizotholwa. Isiqinisekiso, le, ngeke ubuyiselwe.
Uyabheja 20 € on ukunqotshwa kwePSG neChelsea (amaphuzu de 2,00)
Nge 30 imizuzu esele, Paris 2-0, Umshuwalense we-1XBet unikeza 7 € ngokubheja kwakho
Uma yamukelwa, isiza sizokhokhiswa 7 €.
Ukubheja kwakho kuwina ekugcineni komhlangano? Uwinile 40 €.
Uma ukubiza kwakho kulahlekile, 1I-XBet ibeke imbuyiselo 20 €.
Le formula ihluke kancane kuleyo yokukhipha imali enikezwa ezinye izingosi zemidlalo eParis ngoba akukho ukuhlengwa okusheshayo.
Ngokungafani nemali yokuthatha umhlalaphansi efana, ungaqiniseka ukuthi iphesenti olifunayo. Kungenzeka uqinisekise ukubheja kwayo okuphelele noma ingxenye.
Ngaleso sizathu, izindleko zomshuwalense ngaphansi. Okungafani, uma ulahlekelwa ukubheja kwakho, ingxenye yokubiza amagama engakhokhiwe ngeke ibuyiselwe.
Xhumana namakhasimende we-1XBet
Unezinkinga zokubhalisela i-1XBet? Ngakho-ke, thola usizo ngokuxhumana ne-1XBet yesiteji yezobuchwepheshe. ukuze wenze, unezinketho ezahlukene:
Buza umbuzo wakho engxoxweni ebukhoma
Shayela +380 80080013
Bhalela [email protected]
Thumela umlayezo usebenzisa ifomu lokuxhumana
Ukubhalisa ku-1XBet: imibuzo evame ukubuzwa
Ngingakwazi ukubhalisa ne-1Xbet France noma eBelgium?
Hhayi, 1I-Xbet ayikho emthethweni eFrance noma eBelgium. Ngakho-ke, kuphela ngabadlali base-Afrika abakhuluma isiFulentshi kuphela abangabhalisa futhi babhejane kuhlobo lwesiFulentshi lobhuki.
Ngabe nginelungelo lebhonasi uma ngibhalisela i-1XBet evela eCameroon?
Kunjalo. Uma uvula i-akhawunti evela eSenegal, ungaphumelela 393 000 Ama-CFA ama-Frans kwidiphozi yakho yokuqala. Uzokwazi futhi ukuzuza ekunikezelweni kokuma okuphelele okusetshenziswa ngesikhathi yisiza.
Bhalisela i-1XBet Côte-d'Ivoire inikezwe ilungelo lebhonasi?
Uma uvula i-akhawunti ku-1XBet Cameroon, uzokujabulela 100% Ibhonasi yakho yokuqala yokufaka kanye nokunyuswa kwe- "Lucky Friday" ne "Lwesithathu – iphindaphindwe ngu 2 ». Wena, kufanelekile konke ukunikezwa okukhona esizeni.
Ingabe ikhona ibhonasi ekhethekile uma ubhalisa nge-1XBet ephathekayo?
Hhayi, vula i-akhawunti ngohlelo lokusebenza lwe-1XBet olungenalo ilungelo lebhonasi ekhethekile. Okungafani, ungasizakala ngesithembiso sediphozi futhi 2 ekhethekile "Lucky Friday" unomphela futhi "uLwesithathu – iphindaphindwe ngu 2 ».
Nginenkinga nokusayina i-1XBet: Kumele ngenzeni?
Uma ungavuli i-akhawunti yakho, thumela umyalezo ku- [email protected] echaza inkinga yakho. Ungashayela futhi 380 80080013 impendulo esheshayo.
Ukubhaliswa ku-1XBet kusuka kwikhompyutha
1I-XBet yazi ukuthi ukubhaliswa kungenzeka ngaphandle kokunikeza igama noma igama lakho. Noma kunjalo, ukugwema izinkinga ngokuhoxiswa, kungakuhle ukuthola imininingwane ye-akhawunti yakho yasebhange kanye nemininingwane yomuntu. Inqubo yokubhalisa ye-1XBet imi ngalendlela elandelayo:
Khetha izwe lakho ohlala kulo nemali ofuna ukudlala ngayo
Yenza idiphozi yakho yokuqala
Iya kuzilungiselelo ze-akhawunti yakho bese ufaka imininingwane yakho
uqoqe ngokuzenzakalelayo ibhonasi yakho yokwamukela inani elilingana nediphozi yakho (kufinyelela umkhawulo we 100 €)
Qaphela: ngemuva kokungena ngemvume ku-1XBet, le site n’est pas tenu de vérifier votre adresse et compte bancaire par le biais d’une procédure spéciale comme dans le cas des bookmakers autorisés par l’ARJEL par exemple. Noma kunjalo, 1XBet peut refuser le paiement des gains si le montant que vous souhaitez supprimer n’est pas proportionnelle à laquelle il a accrédité.